Indlela ukukhubaza sezulu sezulu for the "Beeline" wena?
Inketho kusukela "Beeline", ukuhlinzeka ababhalisile ulwazi sezulu mode inthanethi ngaphambili ngempela efanele. Kufanele uvumelane ekahle kakhulu ukuhlola lokho izimo lokushisa silindele futhi ukuthi uthathe i-umbrella ngaphambi kokushiya indlu. Nokho, ngenxa Inthanethi engenantambo ezitholakalayo okwamanje futhi angenamkhawulo, sezulu ayatholakala mahhala. Kulokhu, ungakhetha ngisho nokubonakala kokungqubuzana isikhunta, outputting ulwazi. Kule ndaba, amakhasimende amaningi unemibuzo mayelana nokuthi ukukhubaza isimo sezulu i- "Beeline". Lesi sihloko sizosibonisa izindlela ezimbalwa ukuqeda amasevisi ezingadingekile.
Ukuvimbela ngedivayisi yeselula
Susa kusukela uhlu amasevisi atholakala ekamelweni, isimo sezulu kungenzeka ngisho kusukela igajethi mobile. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa USSD-isicelo elandelayo * 111 * 4751 #. isaziso izothunyelwa impendulo yokuthi ukhetho lukhubazekile. Buka sezulu kulindeleke indlela ngaphambilini ajwayelekile kusaba kungenzeka.
Futhi indlela ukukhubaza umhlahlo nge-SMS "Beeline" uma kwenzeka ukuthi isicelo ngokusebenzisa lokhu akukwazi kwenziwe? Yeka ukuthola ulwazi izimo sezulu kanye ungathumela inombolo 2 emyalezweni inombolo 4741. Ngemva kokuthola lo mlayezo impendulo, ungaqiniseka ukuthi okuningi imali yelayisensi bhala-off ngeke kwenziwe.
Ngaphambi echaza indlela ukukhubaza sezulu sezulu for the "Beeline" kuyi-Internet, Ngithanda wazi ukuthi ukusetshenziswa web umsizi kungaba ukufeza noma iyiphi imisebenzi egumbini. Futhi ukuze athole ukufinyelela izinombolo zekhasi zabo, ngokwanele ukuba babhalise kwi portal, ungene, bese ku amasevisi uhlu, khetha "Khubaza" eduze amasevisi oyifunayo.
Ohlwini ongakhetha atholakalayo ukwenza kusebenze, ungathola izinkonzo nosizo nehuha ukuthi kungase kube usizo iklayenti ekuphileni kwansuku zonke, noma lapho, isibonelo, uma uzulazula.
Sebenzisa amasevisi Izikhungo egumbini lokuphatha
Kulabo amakhasimende abanentshisekelo indlela ukucima amasevisi "Isimo sezulu" ku "Beeline" ngezinye izindlela, ukukwazisa ukuthi babuye babe nethuba lokupha ukusizakala izinkonzo wabelane ukuthi ilawule isibalo. Bheka imenyu inkonzo ngezindlela ezimbili:
faka isicelo USSD;
ushayele inombolo iDemo.
Futhi eqinisweni, kuzo zombili izimo kuyodingeka ukuba bajwayelane uhlu lwezinto ezihlongozwayo nezenzo ngokukhetha kwabo. Ukuze uphathe uhlu amasevisi nge-USSD portal kufanele ushayele * 111 # isicelo. Phikisa kungenzeka isibalo 0611 (inombolo yocingo engakhokhelwa imahhala kusuka kunoma iyiphi inombolo "Beeline", kungakhathaliseki ukuthi amazwe esifundeni) kumenyu izwi.
Call emgqeni ukwesekwa mobile opharetha amakhasimende
Indlela ukukhubaza sezulu sezulu phezu "Beeline" ngokusebenzisa contact centre onguchwepheshe? Ukushayela hotline, ukusekela ikhasimende omnyama ophuzi opharetha kufanele ushayele 0611. Ngemva kokulalela imenyu izwi, khetha iphuzu lapho uxhumano unikezwa isilawuli, futhi balinde. Emva uxhumano kufanele ngizethula - ukucacisa inombolo umnikazi idatha kanye ucele ukhubaze isevisi sezulu.
Ngaye ngaphambili kulesi sihloko sikunikeze ngezindlela ezokwenza ukuphendula umbuzo kanjani ukukhubaza isimo sezulu i- "Beeline". Nomaphi lapho ukhetho kungasebenzi isevisi noma iklayenti esetshenziswa kungasebenzi kuyoba khulula. Ngesikhathi esifanayo emini, lapho ukhetho Ukukhipha, imali nyangazonke lizokhokheliswa - ngakho ukuhlola esele ngosuku olulandelayo, ningatatazeli. Ukuze uqinisekise ukuthi nsizakalo ngempela asuswe ikamelo, lwanele ukuhlola uhlu lokukhethwa kukho atholakala ku-SIM khadi. Ngokwesibonelo, kuyi-Internet.
Indlela ukucacisa indawo inombolo yocingo
"Megaphone": "Yonke indawo ekhaya". Uxhumano futhi Ukukhipha amasevisi. Indlela Yenza kusebenze "Yonke indawo ekhaya"
AirBeats - ama-headphone Wireless: nokubuyekeza amakhasimende.
Indlela obumbene ijezi spokes esikhulu viscous
Isisho ngegama elithi "umsebenzi" futhi lokho kusho
Indian Ocean: isikwele sici